Qoys saddex bilood ku xayiran garoonka diyaaradaha Bangkok - BBC News Somali
Image caption Suvarnabhumi waa garoonka diyaaradaha ugu wayn Thailand
Ma jiro qof ku farxaya in muddo uu ku sugnaado eelaboor gudihiisa, laakiin qoys ka soo jeeda Zimbabwe ayaa ku dhowaad saddex bilood ku xanniban garoonka diyaaradaha Bangkok.
Sida ay sheegtay waaxda socdaalka Thailand, qoyska waxay ka kooban yihiin afar canug oo ka yar 11-sano iyo afar qof oo waawayn. Waxay Bangkok galeen bishii May, balse hadda waxay diidan yihiin in dalkooda dib loogu celiyo "cabsi aawadeed".
Waxaa sheekadooda la maqlay ka dib markii qof sheegay in uu ka shaqeeyo garoonka uu Facebook geliyay sawir muujinaya isagoo hadiyad siinaya qoyskan.
Farriinta oo hadda la tirtiray, Kanaruj Artt Pornsopit, wuxuu ku sheegay in qoyska ay eelaboorka ku noolaayeen ku dhowaad seddax bilood "sababo la xiriira xasillooni darrada dalkooda ka jirta".
"Waxaan dhammaan idiin rajeynayaan in dalkiina macaan si degdeg ah ugu noqotaan", ayuu yiri.
Image caption Shaqaalaha garoonka ayaa qoyska siiyo cunto iyo caawinta kale ee ay u baahan yihiin
Afhayeenka waaxda socdaalka Pol Col Cherngron Rimphadee, wuxuu BBC-da u sheegay in qoyskan ay dalka Thailand ku galeen dalxiis ahaan. Waxay isku deyeen in Bangkok ay ka duulaan bishii Oktobar oo ay sii aadaan magaalada Barcelona ee dalka Spain, ayagoo sii mari lahaa magaalada Kiev ee Ukraine.
Balse waa loo diiday in ay diyaaradda raacaan, maadaama aysan haysan dal ku galka Spain.
Sidoo kale waxaa laga hor istaagay in ay Thailand gudaha u galaan maadaama ay dalka ku sugnaayeen muddo ka badan intii loo ogolaaday ee Visa-hooda ahaa. Waxaa lagu qasbay in ay bixiyaan ganaaxa shantii bilood ee dheeraadka ahayd ee ay Bangkok joogeen.
Waxay markii dambe isu diyaariyeen in Kiev ay sii maraan oo ay tagaan Dubaay, ka dibna dal kale oo Yurub ah halkaasi ka galaan.
Maxaa lagu xasuusan doonaa Robert Mugabe?
Waydiimaha jawaabaha loo waayay ee Zimbabwe
Sikastaba, waaxda socdaalka ee Thailand ayaa sheegtay in qoyska ay joojiyeen tikitkii ay Dubaay uga sii gudbi lahaayeen, taas oo qasabtay in markale lagu celiyo Bangkok.
Image caption Dabaaldegyo ayaa ka dhacay Zimbabwe, markii Mugabe uu is casilay
Qoyskan waxay diidan yihiin in Zimbabwe lagu celiyo, waxayna sheegayaan in ay ka baqayaan "in la dilo" ka dib qalalaasihii Nofembar ee xilka looga tuuray Mugabe oo 37 sano dalkaasi xukumayay.
Balse, hadda qalalaase muuqdo kama taagna dalka Zimbabwe, marka qof dalka ku nool ayaa ka hor yimi cabsida xasilloni darada ee qoyskan ay sheegeen.
Xuquuqda Sawirka @ElijahMinana @ElijahMinana
Col Rimphahdee, afhayeenka waaxda socdaalka Thailand, ayaa sheegay in qoyska ay Qaramada Midoobey ka dalbadeen megengelyo, laakiin weli ay ku nool yihiin eelaboorka Suvarnabhumi, laguna quudiyo garoonka gudihiisa.
Wuxuu laanta BBC-da ee Thai u sheegay in hay'adda qaxootiga ee UNHCR "ay dalbatay" in qoyska ay sii joogaan Thailand "inta laga shaqeynaayo hannaaanka dal seddaxaad loogu dirayo".
Image caption Suvarnabhumi wuxuu ka mid yahay garoomada caalamka ee leh suuqyada aadka qaaliga u ah
Afhayeen u hadlay UNHCR wuxuu sheegay in "hadda ay eegayaan xaaladaha suuragalka ah" balse aysan bixin karin faafaahin dheeraad ah ama xaqiijin.
Dalka Thailand ma aqbalo qaxooti iyo dad megengelyo doonka ah.
Madaxweynaha Zimbabwe oo ‘ku raad jooga’ lacago la xaday
Saamayn intee la'eg ayuu Shiinaha ku leeyahay Zimbabwe?